WhatsApp ကို SD သို့ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲ။ သင်၏မိုဘိုင်းမဟုတ်ဘဲပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ကိုသုံးပါ Gadget သတင်း
messaging application များသည်ဤနေရာတွင်ဆက်လက်ရှိနေပြီးယနေ့တွင်အသုံးပြုသူများသည်မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုသော tool တစ်ခုဖြစ်လာသည် ခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပြုလုပ်ပါအနည်းဆုံးဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲတွေကြားမှာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဘုရင်မပလက်ဖောင်းဖြစ်သည့် WhatsApp ။
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည့်ကိရိယာပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ထားသည့်ဖွဲ့စည်းမှုအရကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းသည်အလွန်များပြားသောအုပ်စုများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့်ဓါတ်ပုံများကိုများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်မျှဝေထားသည့်အုပ်စုများတွင်ပါ ၀ င်ပါကအလျင်အမြန်ဖြည့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းမှတ်ဉာဏ်ပြည့်နေလျှင်၊ WhatsApp ကို SD သို့ရွှေ့ပါ.
သို့သော် Device အားလုံးတွင်ဤပြproblemနာရှိသည်မဟုတ်ပါ အက်ပဲလ်အိုင်ဖုန်းများတွင်သိုလှောင်မှုနေရာချဲ့ထွင်ရန်အခွင့်အလမ်းမရှိပါထို့ကြောင့်၊ WhatsApp မှသိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာမှအကြောင်းအရာကိုထုတ်ယူရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ၎င်းကိုစက်မှဖယ်ထုတ်ခြင်း (သို့) အိုင်ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာသို့ iTunes နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ဖြည်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော် Android terminal များ သိုလှောင်နေရာချဲ့ရန်ပြproblemနာမရှိပါ။ Terminal အားလုံးသည်၎င်းကို microSD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့ရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်၎င်းသည်မည်သည့် application သို့မဟုတ် content အမျိုးအစားကိုမဆို terminal ထဲသို့၏အတွင်းပိုင်းအာကာသကိုလွတ်မြောက်စေရန်ကဒ်သို့ရွှေ့ပြောင်းစေပြီးသင့်တော်သောလည်ပတ်မှုအတွက်လိုအပ်သောနေရာ။
1 WhatsApp ကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ပါ
2 WhatsApp တွင်နေရာချွေရန်သိကောင်းစရာများ
2.1 WhatsApp settings ကိုစစ်ဆေးပါ
2.2 WhatsApp ကိုက်ဘ်
WhatsApp ကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ပါ
Android တွင် application များကို install လုပ်သည့်အခါ၎င်းတို့သည်လိုအပ်သည့်ဗဟုသုတမရှိပါက application application များကိုဘယ်တော့မျှ ၀ င်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုစနစ်အတွင်း၌တပ်ဆင်ထားသည်။ WhatsApp ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Android terminal တွင်တပ်ဆင်တိုင်းအချိန်ကာလအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ root directory ထဲတွင် WhatsApp ဟုခေါ်သောဖိုင်တွဲကိုဖန်တီးသည်။ Terminal တွင်လက်ခံရရှိသည့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသည့်ဖိုင်တွဲတစ်ခု။
နှစ်အနည်းငယ်လောက်မှာ Android ကကျွန်တော်တို့ကို application အချို့ကို SD card သို့ရွှေ့ပြောင်းခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ဖို့နေရာက memory card ရဲ့နေရာဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အလွန်နည်းပါး applications များဖြစ်ကြသည် ဒေတာများကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်, နှင့် WhatsApp သည်သူတို့ထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်ဖိအားပေးခံရလိမ့်မည်။
အမည်ရှိဖိုလ်ဒါတစ်ခုလုံးကိုရွှေ့ပါ WhatsApp ကို မှတ်ဉာဏ်ကဒ်သည်သုံးစွဲသူထံမှဗဟုသုတအနည်းငယ်သာလိုအပ်သောအလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သင်ရုံလိုအပ်ပါတယ် ဖိုင်မန်နေဂျာတစ် ဦးကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ၏ root directory သို့သွားပြီး WhatsApp ဖိုင်တွဲကိုရွေးပြီးဖြတ်လိုက်ပါ။
နောက်တဖန် file manager ကိုအသုံးပြုပြီး memory card ၏ root directory ကိုသွားပြီး folder ကို paste လုပ်လိုက်ပါ။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို အချိန်ကြာမြင့်စွာယူနိုင်ပါတယ်ဤစက်သည်ကျွန်ုပ်တို့စက်ပေါ်တွင်လက်ရှိသိမ်းထားသောနေရာပေါ်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနေသော microSD ကဒ်အမြန်နှုန်းပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့ WhatsApp ဖိုင်တွဲတွင်သိမ်းထားသောအရာအားလုံး မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နေရာများစွာကိုလွတ်မြောက်စေသည်။ WhatsApp application ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဖွင့်သည့်အခါ WhatsApp ဟုခေါ်သောဖိုဒါသည်ကျွန်ုပ်တို့စက်၏ root directory တွင်ထပ်မံဖန်တီးလိမ့်မည်။
ဤ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမှန်မှန်လုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွန်းအားပေးသည်အထူးသဖြင့် terminal သည်သိုလှောင်ရန်နေရာသည်ပုံမှန်ထက်နိမ့်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားစဉ်ဆက်မပြတ်သတိပေးလာသောအခါ။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့အားဖိုင်မန်နေဂျာအားရင်းရင်းနှီးနှီးကမ်းလှမ်းသောထုတ်လုပ်သူများစွာက WhatsApp ကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရန်အတွက် Google Play ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။
သင်၏ terminal ကိုဆိုပါက ဖိုင်မန်နေဂျာမရှိပါဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးများအနက်တစ်ခုမှာ ES File Explorer ဖြစ်သည်။ ဖိုင်မန်နေဂျာသည်ဖိုင်များကို အသုံးပြု၍ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းသုံးစွဲသူများ၏အသိပညာသည်အလွန်နည်းသည်။
ES ဖိုင် Explorer
ရေးသားသူ: ES ကမ္တာ့
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးမပြုလိုသည့် application တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့မ download ချင်ပါကသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်ဖိုင်မန်နေဂျာသည်ထင်ရနိုင်သည်ထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပါက WhatsApp အကြောင်းအရာများကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ပြောင်းရန်အမြဲတမ်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စမတ်ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးအသုံးပြုရန်သာလိုအပ်သည် Android ဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်း
Android File Transfer သည် Google ၏ application တစ်ခုဖြစ်သည် တစ်လမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာထည့်လေ့မရှိ လုံးဝအခမဲ့ အကြောင်းအရာနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းကိရိယာများမှစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်မည်သည့်ပြproblemနာမျှမရှိဘဲစုစုပေါင်းအမြန်နှုန်းဖြင့်လွယ်ကူစွာလွှဲပြောင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကိုစမတ်ဖုန်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါကလျှောက်လွှာသည်အလိုအလျောက်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ မအောင်မြင်ပါက၎င်းကိုလုပ်ရန်အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။
လြှောကျလှာ စမတ်ဖုန်းရဲ့ပါဝင်မှုအားလုံးနဲ့ဖိုင်မန်နေဂျာကိုပြလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ရှိမှတ်ဉာဏ်ကဒ်တွင်ဖြတ်တောက်နိုင်သည့်အပလီကေးရှင်းသည်အသုံးပြုခွင့်လည်းရှိသည်။ WhatsApp အကြောင်းအရာများကို SD ကဒ်သို့ရွှေ့ရန်အတွက် WhatsApp ဖိုင်တွဲကိုသွားပြီးညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး Cut ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် SD card သို့လျှောက်လွှာကိုယ်နှိုက်မှ root directory သို့ သွား၍ right-click နှိပ်၍ Paste ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီကော်ပီကူးခြင်းနှင့်ငါးပိအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးလျှင်, ငါတို့ရုံနိုင်ပါတယ် terminal ၏ SD ကဒ်သို့စက်၏ internal memory မှ WhatsApp ဖိုင်တွဲကိုဆွဲယူပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်မည်မျှကြာသည်ကဒ်အမြန်နှုန်းနှင့်လမ်းညွှန်အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဤတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရသောပစ္စည်းကိရိယာများ၏သတ်မှတ်ချက်များသည်လုပ်ငန်းစဉ်၏မြန်နှုန်းကိုမလွှမ်းမိုးပါ။
WhatsApp settings ကိုစစ်ဆေးပါ
WhatsApp ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုမရွေ့မီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာအားဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများအားအလျင်အမြန်ဖြည့်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားရမည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် WhatsApp ပြင်ဆင်သတ်မှတ်မှုများနှင့်ကဏ္ and အတွင်းသို့သွားရမည် မာလ်တီမီဒီယာကိုအလိုအလျောက် download လုပ်ပါ ဗွီဒီယိုများကိုရွေးပါ ဘယ်တော့မှ.
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းနှုန်းကိုချွေတာနိုင်ရုံသာမကနေရာအများဆုံးနေရာ၌ရှိသောဖိုင်အမျိုးအစားများဖြစ်သောဗီဒီယိုများကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်။ \_ t ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ထဲသို့အလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည် ကျနော်တို့အနည်းဆုံးစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ပေမယ့်။
ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်အုပ်စုများသို့ပို့သောဗွီဒီယိုများကိုတွေ့နိုင်ရန်ရွေးစရာတစ်ခုမှာ၊ အထူးသဖြင့်ဤမာလ်တီမီဒီယာဖိုင်နှင့်အလွန်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိလျှင်၊ ကွန်ပျူတာဖြင့် WhatsApp ဝက်ဘ်မှတဆင့်ဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ WhatsApp ဝက်ဘ်ကိုသွားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်သောအရာအားလုံး cached လိမ့်မည်, ဒါ့အပြင်၎င်းကိုအခြားကွန်ပျူတာများသို့ကူးယူနိုင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သိုလှောင်မှုနေရာကလျင်မြန်စွာလျှော့ချနိုင်အောင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့ကူးယူရန်မလိုအပ်ပါ။
iOS နှင့် Android နှစ်ခုလုံးတွင် WhatsApp သည်ကျွန်ုပ်တို့စက်ပေါ်ရှိဗီဒီယိုများနှင့်ဓါတ်ပုံများကိုလှည့်စားလိုပါသလားဟုကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်၎င်းအားအလိုအလျောက်ဂရုစိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းအာကာသလျော့နည်းစေသည်။ ဒီလုပ်ဆောင်မှုက messaging application မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောဗွီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံအားလုံးကိုဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြခန်းအားအခါအားလျော်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားပေးသည်။
Telegram ကဲ့သို့သောအခြား application များကကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုလက်ခံရန် application ကို configure လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြခန်းတွင်တိုက်ရိုက်သိုလှောင်ခြင်းမပြုလုပ်ပါနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်လိုချင်သည့်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုသာသိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပေါ်တွင်၎င်း၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်အတွက် application ၏ cache ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသောအကြောင်းအရာအားလုံးကိုမှန်မှန်သွန်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
WhatsApp အုပ်စုများသည်အဓိကပြproblemနာဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာသည်ကျွန်ုပ်တို့မတောင်းခံထားသည့်အပိုဆောင်းအကြောင်းအရာများကိုအလျင်အမြန်ဖြည့်စွက်သောအခါ၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများထက် multimedia အကြောင်းအရာများပိုပို့သည့်အုပ်စုများတွင်မပါဝင်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းအဆင်ပြေပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » လဲ tutorial » WhatsApp ကို SD ကဒ်သို့ဘယ်လိုရွှေ့ရမလဲ
Autonomous Ready Spain, ဘာစီလိုနာကိုကိုယ်ပိုင်ကားနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောစီမံကိန်း